Flekosteel जोड्ने दुखाइ को लागी जेल | सौन्दर्य समीक्षा
Flekosteel जोड्ने दुखाई को लागी जेल
Flekosteel तपाईंलाई दु: ख र भारी शारीरिक श्रम प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ: एक संक्षिप्त विवरण, उपयोगी गुण र contraindication, सामग्री, प्रयोगको विधि र परिणाम, र समीक्षा।
के हो Flekosteel?
Flekosteel जडिबुटीहरूमा आधारित क्रीमयुक्त बाम हो जुन कि तताउने र एनाल्जेसिक प्रभाव हो। यो सम्पूर्ण शरीरको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, बाह्यरूपमा संयुक्त र मांसपेशीको दुखाइको लागि, तिनीहरूको गतिशीलता सुधार गर्न, वा यसको ठीक उल्टो - आराम गर्न मद्दत गर्दछ। स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित, रासायनिक कम्पोनेन्टहरू बिना, यो सामान्य घरेलू अवस्थाहरूमा, डाक्टरको नुस्खा बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ। उत्पाद प्रमाणित छ।
कहाँ किन्ने Flekosteel र यसको मूल्य?
यी धेरै ज्वलन्त प्रश्नहरू हुन्। तथ्यको कारण Flekosteel पूर्ण रूपमा नयाँ र प्रभावी छ, मूल्य बढाएको छ! म आफ्नै लागि भन्नेछु - अझै यो खरीद यसको लायक छ। जेलले जोड्ने दुखाइ कम गर्दछ र मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ। एक समर्थक बॉडीबिल्डरको रूपमा, म चोट, तान्न वा चोटपटक पछि वेटलिफ्टरहरूको सिफारिश गर्न सक्छु। 1-2 दिनहरू र दुखाइ बित्छ, यसले थप उपचारलाई छिटो गर्दछ र छिटो पुन: भण्डार गर्दछ। यो किन्नको लागि सजिलो छ Flekosteel इन्टरनेटमा।
Flekosteel यसको पैसा निश्चित रूपले मूल्यवान छ, विशेष गरी, आधिकारिक वेबसाइटमा 50% छुट दिइयो
गुण र लाभ Flekosteel balm
कुनै पनि आन्दोलन बिना कुनै व्यक्ति बाँच्न सक्दैन, तर कहिलेकाँही आन्दोलनले यस्तो अस्वस्थता ल्याउँछ कि घरमै रहन आवश्यक छ, संभवत ढल्किनुपर्दछ। मांसपेशिहरुमा वा जोर्नीहरूको दुखाइका कारणहरू निम्नानुसार छन्:
तीव्र श्वासप्रणाली संक्रमण, श्वासप्रणाली संक्रमण, चिसो, इत्यादिको सूजन
शल्य चिकित्सा पछि लामो या लामो समयसम्म स्थिरता
तीव्र शारीरिक श्रम पछि पीडा
जोड़हरु, मांसपेशिहरुमा बिभिन्न प्रकृति को दुखाई।
माथिका सबै प्रयोगका लागि संकेत हो Flekosteel शरीर ताप को लागी। बाम चाँडै अवशोषित हुन्छ र रक्तवाहिकाहरू र केशिकाओंमा रक्त संचार सुधार गर्दछ (कडा रूपमा टिश्युहरू खुवाउने र विष बाहिर टाढा), असुविधालाई सजिलो पार्छ, गतिशीलतालाई पुनर्स्थापित गर्दछ।
यो प्रयोग गर्न गाह्रो छैन Flekosteel जोड्ने दुखाइको विरूद्ध क्रिम भन्दा: यसलाई पनि डाक्टरको सल्लाहको आवश्यकता पर्दैन, यो सजिलै शरीरको एक समस्याग्रस्त भागको छालामा घुसिन्छ।
Flekosteel नियमित अनुप्रयोगको आवश्यक पर्दछ, यसले लगभग तुरून्त कार्य गर्दछ र धुने वा कुनै अन्य हेरचाह आवश्यक पर्दैन। यस बडी बामको तापक्रम प्रभाव पार्दछ, जस्तै समान क्रीमको विपरीत यसले यसमा बोट-आधारित तत्त्वहरू (हर्बल एक्स्ट्रक्स र आवश्यक तेलहरू) समावेश गर्दछ। सामग्रीहरू एक अर्काको प्रशंसा गर्न विशेष रूपमा चयन गरिन्छन् र शरीरमा दुखाइ वा असुविधा हटाउने उद्देश्यले एक synergistic प्रभाव छ।
Flekosteel डाक्टरले तोकेको उपचारसँग मिसाउन सकिन्छ। उदाहरण को लागी, बाह्य प्रयोगको लागि ईन्जेक्सन र बाम संयोजन गर्दै। उपचारको अतिरिक्त, शरीरको हेरचाह उत्पादन एक रोकथाम विधिको रूपमा उपयुक्त छ, उदाहरणका लागि, खेल प्रशिक्षण, स्कीइ or वा स्केटि before अघि शरीरमा लागू। खैर, शरीरको लागि बामको साथ एउटा ट्यूब जहिले पनि तपाईंसँगै लिन सकिन्छ र तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ Flekosteel तनाव कम गर्न र रिलक्सन प्राप्त गर्न।
को विरोधाभास Flekosteel
उत्पादकहरूले प्रत्यक्ष संकेत गर्दछ कि उत्पादनको व्यक्तिगत असहिष्णुता भएका व्यक्तिहरूले यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यहाँ केहि कोटीहरू छन् जसको उपयोग Flekosteel उपचार ल्याउने छैन, यी हुन्:
गर्भवती र स्तनपान गराउने महिला
छालामा तातो प्रभावको साथ एक बाम लागू गर्न खतरनाक छ जुन खुला चोटहरू (सानो) पनि वा क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरू छन्। अप्रिय जलाउने र असुविधा आउन सक्छ। श्लेष्म ऊतकहरू र विशेष गरी आँखा सम्पर्कको साथ सम्पर्क बेवास्ता गर्नुहोस्।
को रचना Flekosteel
यसमा मुख्य सक्रिय सामग्रीहरू Flekosteel बोट र तेल अर्कहरू हुन्:
स्पong्गिला एक्स्ट्र्याक्ट। यो यसको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी, एन्टी-हेमेटिक र स्थानीय उत्तेजित (वार्मिंग) कार्यको लागि उपयोगी छ, यो चोट र घर्षण बिरूद्ध मलहममा फेला पार्न सकिन्छ;
कैलिसिया फ्रान्स्र्स एक्स्ट्र्याक्टयसमा निहित flavonoids को कारणले, एन्टि-ट्यूमर, एन्टी-इडेमा, एन्टी-भड़काउने प्रभाव छ। क्यालिसिया को निकाले चयापचय प्रक्रिया उत्तेजित गर्दछ र एनेस्थेटिक सम्पत्ति हुन्छ;
लाल मिर्च तेल। बलम पदार्थ जुन सँधै नर्भ पेन्ड, रेडिक्युलाइटिस, साइटिका, दाहक दुखाइ इत्यादि बिरुद्द तापी मलहममा समावेश गर्दछ। Flekosteel रक्त परिसंचरण सुधार, विरोधी भड़काउने र एनाल्जेसिक प्रभाव छ;
Fir र Eucalyptus तेल। यसको रमाईलो र चिकित्सीय गन्धको अतिरिक्त, तेलहरूको शक्तिशाली एन्टिब्याक्टेरियल प्रभाव हुन्छ, र टिश्युहरूमा मेटाबोलिक प्रक्रियाहरू बढाउँदछ। ती दुबै सुखदायक र आरामदायी सामग्रीहरूमा पनि प्रयोग हुन्छन्;
अदुवाको आवश्यक तेल। यसले छाला र टिश्युहरूमा टोनि effect प्रभाव पार्दछ, मेटाबोलिज्मलाई सुदृढ पार्दछ, जीवाणुरोधी र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू हुन्छ, र ऐंठनलाई राहत दिन्छ;
दालचीनी आवश्यक तेल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू छन्, रक्त परिसंचरण बढाउँछ र विषाक्त पदार्थहरू बेअसर गर्दछ। दालचीनी तेल गठिया को लागी एक ज्ञात उपाय हो;
रोजमेरी आवश्यक तेल। यो एक कामोद्दीपक हो, तर भाग को रूपमा Flekosteel बामको आरामदायी प्रभाव छ, रक्त परिसंचरण सुधार गर्दछ, र अत्यधिक पीडाबाट पीडा कम गर्दछ;
सोया र मकैको तेल। छाला सुखदायक लागि;
कपूर तेल विरोधी भड़काउने र वार्मिंग गुणहरु छ। यदि तपाइँ चिसो वा खोकीले पीडित हुनुहुन्छ भने, तपाइँले यसलाई आफ्नो छातीमा लगाउन सक्नुहुन्छ।
यूरिया र बेटाइनले कम्पोनेन्टको रूपमा कार्य गर्दछ Flekosteel। तिनीहरूले शरीर क्रीम को अन्य सामग्री को प्रभाव लाई बढाउछ, ऊतकमा राम्रो प्रवेश प्रदान गर्दछ। स्वाभाविक रूपमा, आधारभूत सामग्रीको अतिरिक्त, त्यहाँ सँधै सहयोगी हुन्छ, उदाहरणका लागि, कुनै पनि क्रीममा पानी र ग्लिसरीन।
निर्देशनहरू प्रयोग गर्न Flekosteel
यदि तपाइँ लागू गर्नुहुन्छ Flekosteel रोकथामको लागि, यसको प्रयोगात्मक उपचार उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न तुलना गर्न अलि फरक हुनेछ। प्रयोगको लागि निर्देशनहरूमा, निर्माणकर्ताहरूले दिनमा एक पटक बाम प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छन्, वा अपेक्षित शारीरिक श्रम हुनु अघि।
एक उपचारात्मक प्रभाव प्राप्त गर्न, जेल Flekosteel दिनको3सम्म शरीरको दर्दनाक भागहरूमा खसालिन्छ। प्रक्रिया हल्का मसाज आन्दोलनहरू द्वारा गरिन्छ, बाम पूर्ण रूपमा नसेन्जेल सम्म घुसिन्छ। उपचारको वार्म अप प्रभाव तुरुन्तै प्रकट हुन्छ, आराम प्रभाव पनि चाँडै आउँदछ। सूजनयुक्त ऊतकोंको उपचार गर्नको लागि यसले केहि दिनहरू लिन सक्दछ।
को ग्राहक समीक्षा Flekosteel
वार्मिंग बामको बारेमा सकारात्मक समीक्षा संख्याको आधारमा, Flekosteel संयुक्त र मांसपेशी दुखाइ भएका मानिसबाट ध्यान पाउन योग्य छ। निस्सन्देह, यो नकारात्मक टिप्पणीको सट्टा राम्रो समीक्षाको साथ उत्पादनहरू विज्ञापन गर्न अधिक बढी विश्वस्त छ। उदाहरण को लागी, यिहरु:
एनेट, 39 वर्ष पुरानो
स्कीइ After पछि, म जहिले पनि कम्मरमा दुखाइरहेछु। सम्भवतः ओभररेक्सर्सन, वा सूजनबाट। तर मैले कहिल्यै डाक्टरसँग सल्लाह लिएन। सजिलैसँग कपूर, वा तेल मसलाको रूख वा रोमेरीको साथ प्रख्यात क्रीमहरू लागू गर्दछ। यसले सहयोग पुर्‍यायो। अब यहाँ एक नयाँ बाम आउँछ Flekosteel एक तापक्रम प्रभाव संग। मेरो लागि, यो अब सबै भन्दा राम्रो हो: जेल छिटो पीडा कम र मेरो मांसपेशिहरु आराम। तर मुख्य कुरा यो हो कि यो स्की ट्रिप र प्रभाव रहन अघि तपाईंको सम्पूर्ण शरीरमा लागू गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म मूल्य सम्म - पहिलो पटक मैले यसलाई फार्मेसीमा किनें, यो सब भन्दा महँगो क्रीम थियो। पछि धेरै अनलाइन स्टोरमा फेला पर्‍यो।
माइकल, 45 वर्ष पुरानो
म खुट्टामा टेन्डनको सूजनबाट ग्रस्त छु, र यो स्थानमा विशेष मलहम लगाउनु भन्दा राम्रो अरू केही छैन। हालसालै, डाक्टरले सिफारिस गरे कि म प्रयास गर्छु Flekosteel (यसमा हर्बल तत्त्वहरू धेरै छन्), यससँग कार्यको फराकिलो स्पेक्ट्रम छ। मलाई मनपर्‍यो कि कति समय सम्म बामले यसको भड़काउने र एनाल्जेसिक प्रभावलाई कायम राख्छ। म यसलाई चिसो मौसममा पनि प्रयोग गर्दछु, जस्तै रोकथाम, खुट्टाको हाइपोथर्मियाबाट बच्न र फेरि बिरामी नहोस्। कमजोरीहरु मध्ये - 50 मि.ली.मा ट्यूबको लागत धेरै बढी छ, यो राम्रो छ कि मेरो छोरोले पहिले नै एक राम्रो रकम कमाउँछ र हामीलाई मद्दत गर्दछ।
एलेक्सिस, 25 वर्ष पुरानो
मैले भर्खर स्केट गरेको खण्डमा मेरो ढाडमा पसे, र यसलाई गम्भीर चोट पुर्‍यायो। डाक्टर सिफारिस गरियो Flekosteel - एनाल्जेसिक र विरोधी भड़काऊ जेल। वास्तवमा यसले दुईवटा चरालाई एउटा ढु stone्गाले मारेको थियो: मेरो पीठोलाई निको पार्यो र मैले खोक्ने काम बन्द गरें। उत्कृष्ट जेल र यो तपाइँको पैसाको लायक छ!
म ध्यान दिन चाहन्छु कि ग्राहकहरूले नयाँ जेललाई तुरून्त प्रेम गरे र यो लाखौं व्यक्तिलाई दैनिक प्रयोगमा उपयोगी थियो।